Always Split Aces and Eights│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
There are some basics in blackjack. Splitting aces and eights only makes senses sinceahand equaling2ဒါမှမဟုတ် 12 compared to having two hands of 11 isano brainer. Even though you only receive one card to your ace, the chances of getting 21 orarelatively decent hand are good. Splitting eights all the time isabit riskier. Some blackjack studs say not to split eights if the dealer is showinganine oraten. ကျွန်တော့်အတွက်, it depends on how the cards are flowing that day whether I will split the eights all the time or just when it feels right against that dealer nine or ten. Probably the most important strategy for wining blackjack is to always play the dealer foraten in the hole. This will be the basis of your winning strategy. If the dealer is showingaten, you play him as if he has twenty and hit or stay accordingly. The same rule applies if the dealer is showingasix or any other bust combination (12, 13, 14, ဒါမှမဟုတ် 15). You always have to play as if you had x-ray vision and could see the dealer’s hole card. Playing hunches will kill you. You have to haveaplan and stick to it. And your plan should follow the basic rules. Granted there will plenty of times that the dealer doesn’t have that ten in the hole, but you have to stick to your guns and play it that way. One mistake that I seealot of novices make is splitting tens or face cards. They will do this mostly when the dealer is showingabust card. They think they will be able to double their money hitting each one of their tens. This is ridiculous. Who splits the second best hand in blackjack? Definitely not me. Besides doubling down on tens and elevens, if the house allows it, I love to double on soft 13, 14, 15, 16, 17, နှင့် 18 if the dealer is showinga3, 4,5ဒါမှမဟုတ် 6. There isagood chance the dealer will bust, and alsoagood chance you will improve your hand, or getaten and it remains the same. I have always held if I had twelve and the dealer showedabust card. ဒါပေမယ့်, recently I read that you should hita12 against the dealer when he showsa2. I wasabit hesitant to do this since there wasachance that I would bust. ဒါပေမယ့်, playing this way, I have found out that I have won more than I have lost. This strategy you will have to decide for yourself if it right for you. These are some of the basic blackjack strategies that you can apply. The key is to remain consistent even when the cards are against you. If you hitabad run, get up from the table and takeabreak. Don’t keep throwing your money away whenadealer is hot. Always Split Aces and Eights
Posted Articles Title : Always Split Aces and Eights
■Link To This Post (HTML code) : Always Split Aces and Eights
■Trackback URL : Always Split Aces and Eights
Paints ထက် Airsoft သာ။ ကောင်း၏?
Humminbird Matrix 87 Fishfinder – သင်ဖမ်းမိသောငါးကြီးများအတွက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား?
Cabin အိမ်များ Log – ဝုဒ်မှာတစ် ဦး ကအိပ်မက်
ဂျိုး Montana : 1979 နေ့ပုံမူကြမ်း
roller- စကိတ်စီးခြင်း – လူကြိုက်များသောအားကစားတစ်ခု
လူအများစုက roller စကိတ်များသည်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ထားသောတီထွင်မှုဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည်, နှင့်လူကြိုက်များ 20 ရာစုကလေးတွေ’ ကစားစရာ. သို့သော်, roller စကိတ်စီးခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပင်ရာစုနှစ်နှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်, နှင့်ဆိတ်ကွယ်ရာကလေး၏ကစားခြင်းမှများစွာသောအခြားအသုံးပြုမှုရှိသည်. ယနေ့လူသုံးများသောအားဖြင့်တွေ့ရသော roller စကိတ်များသည်ကြိတ်စက်များဖြစ်ကြသည်, ထို့အပြင် inline စကိတ်စီးအဖြစ်လူသိများ. သူတို့မှာဂန္ထဝင်ကားပုံစံပုံစံနဲ့အစားထိုးမယ့်အစားဘီးတွေအားလုံးကိုလိုင်းတစ်ခုစီမှာထားတယ်, ဒါကဟန်ချက်ညီအောင်အနည်းငယ်ခက်ခဲအောင်လုပ်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအများကြီးပိုမြန်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်, စက်ဘီးဖြင့်စက်ဘီးဖြင့်လုပ်သောကားနှင့်ဆင်တူသည်. တကယ်တော့, roller စကိတ်စီးခြင်း၏မူလရည်ရွယ်ချက်မှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဖြစ်သည်: ‘ဘီးဖိနပ်တစ်မျိုး’ ခြေထောက်တွေကိုကပ်ပြီးအားစိုက်နည်းနည်းချင်းနဲ့တစ်နေရာကနေတစ်နေရာကိုရွှေ့နိုင်တယ်. ဒါရှားပါးပေမယ့်, အချို့လူများကယနေ့သူတို့ကိုဤနည်းကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည် ‘ အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်, သွားရန်ဝေးလံသောနေရာများနှင့်စက်ဘီးစီးရန်မလိုသောမြို့ကြီးများတွင်ရုံးဝန်ထမ်းများလည်းရှိသည်. စက်ဘီးစီးခြင်းသည်လူကြိုက်များသောအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်, ထိုသို့ပင်မကြာမီအိုလံပစ်တွင်ထည့်သွင်းစေခြင်းငှါထင်နေသည်. စကိတ်စီးခြင်းပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာစေရန်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သောစကိတ်စီးပန်းခြံများကိုလည်းစကိတ်စီးခြင်းအတွက်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်, နှင့်စကိတ်သမားများကဤနည်းအားဖြင့်စကိတ်သမားများအတွက်အလားတူလှည့်ကွက်များနှင့်လေ့ကျင့်မှုများကိုဆွဲထုတ်နိုင်သည်. roller စကိတ်စီးပြိုင်ကားလည်းအတော်လေးလူကြိုက်များသည်, လူများသည်အလျင်မြန်ဆုံးအချိန်တွင်အတားအဆီးလမ်းကြောင်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့အခြားတစ်ခုသို့ရောက်ရန်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်အတူ. သင်ဆဲ roller စကိတ်စီးခြင်း၏လူကြိုက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချမနေလျှင်, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမြို့ကြီးများတွင်အပတ်တိုင်းသတိပြုသင့်သည်, သောင်းနှင့်ချီသောသူတို့သည် စုဝေး၍ စကိတ်စီးကြသည်. အကြီးဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးအဖြစ်အပျက်မှာပါရီဖြစ်သည်’ သောကြာနေ့ည Pari Roller, ဒါပေမယ့်သေးငယ်ဖြစ်ရပ်များဘာလင်မှာတွေ့နိုင်ပါသည်, တိုကျိုနှင့်လန်ဒန်, အခြားသူတွေအကြား. roller- စကိတ်စီးခြင်း – လူကြိုက်များသောအားကစားတစ်ခု
110cc အိတ်ဆောင်ဆိုင်ကယ်သည်သေးငယ်သောဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပြီးလူကြိုက်များလာသည်. ယခုအခါကမ္ဘာအနှံ့ကျင်းပသည့်အိတ်ဆောင်စက်ဘီးပြိုင်ပွဲများပင်ရှိသည်, အကောင်းဘက်အချို့သည်အိမ်သို့ဒေါ်လာနှင့်ထောင်နှင့်ချီသောဆုများဖြင့်အိမ်သို့ယူဆောင်လာသည်. 110ကလေးငယ်များအတွက်တည်ဆောက်ထားသည့်စီစီအိတ်ကပ်စက်ဘီးများ, သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ကြသည် 38 ရန် 47 အရှည်လက်မနှင့်အကြောင်းကိုအလေးချိန် 50 အလေးချိန်ပေါင်, ဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားသငျသညျအရူးလုပ်မသွားပါစေနဲ့. 110cc အိတ်ကပ်စက်ဘီးကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူများယာဉ်မောင်းများအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသည်. 110cc စက်ဘီးကိုအီတလီမှာလုပ်တယ်, နှင့်အထိအမြန်နှုန်းရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 75 တစ်နာရီမိုင်. 110cc အိတ်ကပ်စက်ဘီးတစ် ဦး ရှိသည် 30 လက်မဘီး, layman ရဲ့စည်းကမ်းချက်များ၌သင်တို့ကိုမြေပြင်ကနေအနိုင်နိုင်လက်မဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်. မြန်နှုန်းမြင့်အလှည့်ရောက်ချိန်တွင်ဤသည်ကျိန်းသေ adrenaline အလုအယက်ထည့်သွင်းပေးသည်! သူတို့ရဲ့သေးသေးလေးအရွယ်အစားကြောင့်, အိတ်ဆောင်စက်ဘီးစီးခြင်းအားဖြင့်ပုံမှန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွင်မရရှိနိုင်သည့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအချို့ရှိသည်. အိတ်ဆောင်စက်ဘီးပြိုင်ပွဲသည်ယနေ့တည်ရှိနေသောတန်ဖိုးအရှိဆုံးမော်တော်ကားဖြစ်သည်, ၎င်းသည်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားမှုတစ်ခုအဘယ်ကြောင့်မျှသေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ. ဤသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသင်တန်းသားများကိုဆွဲဆောင်, သူတို့ကိုမော်တာအားကစားအတွက်ဝင်ရန်နိုင်စွမ်းကိုကမ်းလှမ်း, သူတို့မဟုတ်ရင်နိုင်လိမ့်မယ်ဘယ်အချိန်မှာ. အဲဒါကိုမမှားပါ, သော်လည်း, အိတ်ဆောင်စက်ဘီးစီးတာဟာပုံမှန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတာနဲ့မတူဘူး, မြန်နှုန်းမြင့်ဘီးနှစ်ခုပေါ်တွင်ဟန်ချက်ညီအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်. ၎င်း၏သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကြောင့်, အိတ်ဆောင်စက်ဘီးကိုစီးတာကပိုပြီးဟန်ချက်ညီဖို့လိုတယ်, မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း, သွက်လက်, နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်တုံ့ပြန်မှုကြိမ်. အဆိုပါ adrenaline အလုအယက်အများအပြားအစသင်တန်းသားများကိုချိတ်ဆက်နှင့်တစ်သက်တာပရိတ်သတ်တွေဖြစ်လာအဓိကအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်. အိတ်ဆောင်စက်ဘီးသည်အသက် ၉ နှစ်အထက်ကလေးများအတွက်သင့်တော်သည်, နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ကအရမ်းဂရုတစိုက်ကြီးကြပ်နေကြသည်. အဆိုပါစက်ဘီးလူကြီးများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်, နှင့်ဒါတက်ကိုထောကျပံ့ဖို့သတ်မှတ်ထားကြသည် 300 အလေးချိန်ပေါင်. 110cc pocket bikes သည်လမ်းအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ, ဤရွေ့ကားလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ပြိုင်ကားများအတွက်လုပ်စက်ဘီးဖြစ်ကြသည်. ကလေးများရောလူကြီးများပါပါအကာအကွယ်ပေးသည့်ပစ္စည်းများကိုအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်သင့်သည်. ယင်းတွင်ပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မထားဘူး, သံခမောက်, လက်အိတ်များ, ဒူးနှင့်တံတောင်ဆစ် pads, မတော်တဆမှုဖြစ်ရပ်အတွက်သားရေအဝတ်. သူတို့ကစားစရာများကဲ့သို့ကြည့်ရှုမည်နေစဉ်, 110cc အိတ်ကပ်စက်ဘီးကိုအစွန်းရောက်မော်တော်ကားပြိုင်ပွဲအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်, နှင့်အညီအတူတူပင်လေးစားမှုနှင့်အတူကုသခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်. 110cc အိတ်ကပ်စက်ဘီး
Golf swing muscles? Is there suchathing? You didn’t think they were important or existed did you? But I’m sure when you’ve gone home afteraround of golf withasore back you were reminded very quickly, you do in fact have golf swing muscles. Having beenacertified conditioning professional for over 20 years and the last 10 with golfers exclusively’I can tell you with one hundred percent confidence there is definitelyamuscular component to the golf swing. And if the muscles have not been trained to work inaspecific sequence, with minimal tension and maximum power, the expected results will not be achieved. What are the important muscles involved in the golf swing? There isn’t one or two of them. The body moves sequentially throughout the golf swing. But through research and years of training, I can say withoutadoubt that the muscles of your core are the most important. Followed by the hamstrings and glutes. The rest of the muscle groups are supportive to the golf swing, which doesn’t mean they are any less important, just not as critical to improving power and consistency. Let’s briefly break down your main golf swing muscles and their role in the golf swing. Shoulders: Support the golf at the top of the swing and also add clubhead speed as an extension of the core. Upper Back: Maintenance of spine angle for ease of turning on backswing and follow through. Lower Back: Critical in maintaining of golf posture during the swing and even putting. Glutes: Helps maintain flex in hips and also athletic, ‘golf squat’ position forapowerful swing base. Quadriceps: Allows for ease of maintaining consistent knee flex and golf posture forarepeatable swing. Hamstrings: The KEY muscle group in producing an effective, optimal and repeatable golf posture for eighteen holes. Core: The engine to the golf swing. Produces maximum power from the pivot. Stored energy from the torque created on the backswing, to unleash into impact. This isavery brief overview of your golf swing muscles. သင်မြင်သည့်အတိုင်း, if these muscles don’t haveahigher level of both strength and flexibility, they will not allow you to achieve your true golf potential. Hopefully you will be motivated to look intoagolf conditioning program to strengthen these golf swing muscles. Strengthening Your Golf Swing Muscles Will Greatly Improve Your Golf Game
Serious scuba diving entails more than just the basic gears of the beginner diver. The diver needs more than just his set of mask, တောင်ပံများ, regulator, oxygen tank, and wet suit to ensure the diver’s safety. For external data that the diver should know, the assistance ofadiving computer is essential. The diving computer provides information on the amount of time needed for decompression and even the depth of the dive itself. It also gauges data such as the levels of nitrogen content in the bloodstream, or decompression sickness that could be fatal to the diver’s life. It would be wise to compare brands of diving computers before actually makingapurchase. Aside from considering factors such as cost, quality and accuracy of the machine should also be weighed out. One effective way of doing this would be to search for reviews of the products and gather consensus of those who have bought and used it in their dives. After buying one’s personal choice it would be prudent to study and understand the features and commands of the equipment. It should be known by heart, in the same way thatabeginner is trained to deal with various situations that can happen to him under water. To get used to operating the product, it would be advisable to use its functions little be little in short-term expeditions. Various unforeseen accidents can occur toadiver, especially when he is underwater. One trick is not to panic and to remain calm. Fear isadiver’s greatest enemy since it can blur out good judgment and training. အပြင်, another aspect that should be checked from time to time is the relaxed breathing of the diver. Panic can cause hyperventilation or worse, rapid ascent towards the surface can cause bubbles to form in the body’s tissues that could cause lack of sensation, immobility, or death. Scuba Diving Equipment
The Playoff Hunt က
The 2006 NFL ရာသီရာသီ၏နောက်ဆုံးတစ်ဝက်ဆီသို့ထောင့်လှည့်ထားပြီးနှင့် PLAYOFF ပုံရိပ်ရွှံ့လာနေသည်. နှင့်အတူ9ဂိမ်းကစား, အဆိုပါ PLAYOFF အဘို့အလတ်သင်းနေသော? အဘယ်သူသည်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်စေခြင်းငှါအဘယ်သူနည်း? ပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အရှုံးကိုစတင်ဖို့လိုအပ်တဲ့သူတွေပေါ့ 2007 မူကြမ်းရွေးချယ်ရေး? ကြည့်ကြရအောင်. AFC အရှေ့၌, PLAYOFF ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုသင်းရှိပါတယ်. အဆိုပါမျိုးချစ်ဖြစ်ကြသည် 6-3 နှင့်တခုတခုအပေါ်မှာဂိမ်းရှိသည် 5-4 ဂျက်လေယာဉ်များ. အဆိုပါဥပဒေကြမ်းများနှင့်လင်းပိုင်များအတွက်ကစားနေကြသည် 2007. အဆိုပါ AFC မြောက်အမေရိကဆုံးရှုံးဖို့ Baltimore ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါဘင်္ဂလားနောက်သုံးပြန်ဂိမ်းဖြစ်ကြပြီးတစ် ဦး PLAYOFF အသင်းကဲ့သို့မထင်ကြဘူး. အဆိုပါ Colts တစ်ပြုသောပြုသောသဘောတူညီချက်ရဲ့ AFC တောင်ပိုင်းပိုင်ဆိုင်သည်. Jacksonville ဖြစ်ပါတယ် 5-4 သူတို့ဟူစတန်ကဲ့သို့အသင်းများကိုဆုံးရှုံးရပ်တန့်နိုင်လျှင်နှင့် PLAYOFF မှာသေနတ်ရှိပါတယ်. AFC အနောက်သည်စစ်တိုက်ခြင်းဖြစ်သည်. Broncos နှင့် Chargers နှစ်ခုလုံးက 7-2. ဤအတောအတွင်း, အကြီးအကဲများဖြစ်ကြသည် 5-4 နှင့်တောရိုင်းကဒ်အဘို့အအမဲလိုက်ခြင်း၌တည်၏. NFC အရှေ့သည်တင်းကျပ်သောပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်. အဆိုပါ Giants Dallas မြို့နှင့် Philadelphia တွင်အပေါ်တ ဦး တည်းဂိမ်းခဲရှိသည်. ဝါရှင်တန်သေပြီ. ချီကာဂို NFC မြောက်အမေရိကအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်. အခြားအသင်းများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နေကြသည် 2007 ရွေးချယ်မှုမူကြမ်း. သူတော်စင်များသည် NFC တောင်ပိုင်းတွင်ချီတက်နေကြသည်. ဒါဟာနေဆဲမည်သူမဆိုရဲ့ဌာနခွဲပါပဲ, ဒါပေမယ့်တစ်နိုင်ငံလုံးကသူတော်စင်တွေကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ PLAYOFF ထဲကို ၀ င်လာဖို့ကြိုးစားနေတာပါ. ကာရိုလိုင်းနားနှင့်အတ္တလန်တာတို့သည်တ ဦး တည်းဂိမ်းပြန်ဖြစ်ကြသည်. Seahawks သည် MVP နှင့် Pro Bowl QB ပြန်လည်လည်ပတ်နေခြင်းမရှိသော်လည်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်. သူတို့က 6-3 နှင့်ယခုရာသီ NFC ကိုအနောက်ယူပါလိမ့်မယ်. အခြားအသင်းများကလည်းတိုးတက်မှုအချို့ကိုပြသနေသည်, သို့သော်ရာသီများဆုံးရှုံးခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟုထင်ရပြီးသူတို့သည်ဤအချက်ကိုအတိတ်က Seahawks အားစိန်ခေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. ဒီတော့, ငါတို့သည်ဤအရေးအသား၏အဖြစ်ရပ်ဘယ်မှာရှိတယ်. ဒါဟာ NFL အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ finish ကိုဖြစ်သွားရပါတယ်. The Playoff Hunt က
များစွာသောဂေါက်သီးရိုက်ဗီဒီယိုနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြသော်လည်းသူတို့၏ဂိမ်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့သည့်ဂေါက်သီးသမားများစွာရှိသည်. အနည်းဆုံးတော့အပြုသဘောမဟုတ်ဘူး. တကယ်တော့တချို့ဂိမ်းတွေအတွက်ဂေါက်သီးရိုက်ဗီဒီယိုကနေသူတို့လေ့လာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားတိုင်းပိုဆိုးလာတယ်. ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကို၏အမှန်တရားတစ်ခုဂေါက်သီးလွှဲဗီဒီယိုတစ် ဦး ဂေါက်သီးရဲ့ဂိမ်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်ပင်၎င်း၏သက်ရောက်မှုမဆိုမျိုးရှိနိုင်သည်ကိုမယုံတဲ့သူအများအပြားဂေါက်သီးရှိပါတယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ’ အရည်အသွေး. ဒီအတွက်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါတယ်. ဥပမာအားဖြင့်ဂေါက်သီးသမားတစ် ဦး သည်တသမတ်တည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏ဂိမ်းသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာသည်ကိုမြင်နိုင်ရန်ပင်မျှော်လင့်ချက်မရှိချေ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဂေါက်သီးမထိုက်မတန်ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲ. ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တရားကဒီဂိမ်းဟာမကြာသေးမီကအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်. ဥပမာအားဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသောကလပ်ခေါင်းဆောင်မှုများနှင့်ပိုမိုလေးလံသောလမ်းကြောင်းများသို့ ဦး တည်သည့်လမ်းကြောင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဂေါက်သီးသမားသည်အမြင့်ဆုံးမျှသာမဟုတ်ဘဲမည်သည့်အဆင့်တွင်မဆိုဖျော်ဖြေရန်လိုအပ်သောကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ကို ထပ်မံ၍ ဖိအားဖြစ်စေသည်။. ဂေါက်သီးရိုက်ဗီဒီယိုသည်ဂိမ်းအများစုကိုမထိခိုက်ကြောင်းအံ့အားသင့်စရာလော? အမှန်မှာဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်, ဥပမာအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလွန်သဘာဝမဟုတ်သောလွှဲသည်. တကယ်တော့ကပိုသဘာဝကဖြစ်ပါတယ်, ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ရလဒ်တစ်ခုကဂေါက်သီးသမားသည်လေ့ရှိသည်. ဒါကများသောအားဖြင့်ဂေါက်သီးသမားအများစုဟာဂေါက်သီးရိုက်ဗီဒီယိုတွေမှာသူတို့မကြာခဏကြည့်လေ့ရှိတဲ့ swing နည်းစနစ်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ခက်ခဲလေ့ရှိပါတယ်. တကယ်တော့ပြtheနာအတွက်ထိရောက်တဲ့ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုပဲရှိပြီးဂေါက်သီးလွှဲခြင်းကိုတတ်နိုင်သမျှသဘာဝအတိုင်းရှာဖွေရန်ကိုယ်ခန္ဓာရှိဂေါက်သီးကြွက်သားများကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ညှိခြင်း. အရည်အချင်းပြည့်မီသူနှင့်သူတို့ဘာလုပ်နေသည်ကိုသိသောမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှပြုလုပ်သောဂေါက်သီးသီးသန့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူရနိုင်သည်. ဒါကတကယ်တော့ဂေါက်သီးသမားအများစုဟာဂေါက်သီးရိုက်ဗီဒီယိုအများစုမှာရရှိနိုင်တဲ့အသုံးဝင်သောအကြံဥာဏ်နှင့်နည်းစနစ်များမှအပြည့်အဝအကျိုးရှိနိုင်သည်. ဂေါက်သီးရိုက်နိုင်တဲ့ဗီဒီယိုကမင်းရဲ့ဂိမ်းကိုပြောင်းနိုင်သလား?
ကဆာမူရိုင်းဓားကိုမှကြွလာသောအခါ, အသစ်သောစုဆောင်းသူနားလည်ရန်ဝေါဟာရများအတော်လေးရှိသည်. ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမဆိုတစ်သက်တာလုံးတည်မြဲနေမယ့်အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဆာမူရိုင်းဓားကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာတွေ့ချင်တယ်, သငျသညျ Paul Chen Katana စစ်တိုက်ခြင်းငှါ၎င်း, ဝတ်လုံကိုကျော်ဆွဲထားဖို့အရည်အသွေးမြင့်ဓားကိုရှာဖွေအလွန်ရှာကြံ၏တ ဦး တည်းကိုရှာဖွေနေလျှင်မည်သို့ပင်။. သင်၏ဆာမူရိုင်းဓားသစ်အတွက်ပထမဆုံးစဉ်းစားရမည့်အရာမှာဓါးသွားအမျိုးအစားနှင့်အရည်အသွေးဖြစ်သည်. သင်တစ် ဦး ကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်သင်သေချာစေရန်နှင့်အပြည့်အဝ tang blade ကိုရွေးချယ်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သောဆာမူရိုင်းဓားများအားလုံးသည်ငါတို့စစ်တိုက်ရာတွင်အဆင်သင့်ထားသည့်ဓားများပါ ၀ င်သည်. ဝေါဟာရကို ‘အပြည့်အဝ tang’ ဆိုလိုသည်မှာ Tsuka အောက်ရှိဓါးနှင့်ဓား၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် (ကိုင်တွယ်) သံမဏိတစ်မျိုးတည်းဖြစ်သည်. သငျသညျအပြည့်အဝ tang မဟုတ်သောထားကိုရလျှင်သင်အခြေခံအားဖြင့်မြို့ရိုးပေါ်မှာဆွဲထားခြင်းနှင့်အခြားဘာမျှမကဝယ်ယူနေပါတယ်. ဓားကိုရွေးချယ်သောအခါစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာဓါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိအမျိုးအစားဖြစ်သည်. အခြေခံအားဖြင့်ရှိပါတယ်3သံမဏိအမျိုးအစားများ, 420 J2 (အစွန်းခံသံမဏိ), ကာဗွန်မြင့်မားခြင်း, နှင့်ခေါက်သံမဏိ. သင်စစ်တိုက်ရာတွင်အဆင်သင့်ထားသည့်ဓားကိုရှာနေပါကသင်နှင့်ဝေးဝေးနေလိုပါလိမ့်မည် 420 J2 သံမဏိ. ကာဗွန်သံမဏိသည်အလွန်အရည်အသွေးမြင့်သောသံမဏိဖြစ်သည်; သို့သော်ခေါက်သံမဏိအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်. တကယ်တော့ဒါကခေါက်တဲ့သံမဏိဟာမတူကွဲပြားတဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုဓါးအတုဖြစ်ပါတယ်. ကာဗွန်သံမဏိပြားများကိုကာဗွန်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်. ခြားနားချက်မှာခေါက်ထားသည့်သံမဏိဓါးသည်သူပြောသကဲ့သို့ဖြစ်သည်; သံမဏိကလုံလောက်သည်ဟုယုံကြည်သည်အထိသံမဏိကိုထပ်ခါထပ်ခါခေါက်သည်. လူအချို့ကကောင်းမွန်သောကာဗွန်သံမဏိဓါးများသည်ခေါက်ထားသောသံမဏိဓါးကဲ့သို့ခိုင်ခံ့နိုင်သည်ဟုပြောကြသည်. Thaitsuki Nihonto ဓားများအတွက်ပန်းချီကားများအနေဖြင့်ကာဗွန်အဆင့်မြင့်သံမဏိပြားများကိုခေါက်ထားသည့်သံမဏိပြားများထက်ပိုမိုအားကောင်းသော်လည်းမစွမ်းနိုင်ဟုဆိုကြသည်။. ဆာမူရိုင်းဓားကိုရွေးချယ်တဲ့အခါအခြေခံအားဖြင့်ရှိပါတယ်3စဉ်းစားရန်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ, အဆိုပါကာတာဓား, Wakizashi ဓားနဲ့ Tanto ဓား. ဂျပန်ကာတာနာဓားသည်စုဆောင်းသူများနှင့်ကိုယ်ခံပညာကျောင်းသားများအကြားတွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်. ကာတာနာဓားသည်ပထမဆုံးဓားလက်နက်ဖြစ်ပြီးဆာမူရိုင်းဓားများထဲတွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်. ဓါးသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၉ ဖြစ်သည်′ 40 ပတ်ပတ်လည်တစ်ခုလုံးကိုအရှည်နှင့်အတူရှည်လျားသော′ Wakizashi ဓားသည် katana ဓားတိုတာထက်တိုတာ. Wakizashi ဓားကိုပထမဆုံး Muromachi ကာလမှာတွေ့ခဲ့ရတယ် (1568-1603). ဝကကီရှီရှီသည် ၁၈ နှစ်အရွယ်ဖြစ်သည်′ ရှည်လျားသောသာဆာမူရိုင်းများကသယ်ဆောင်ခံရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်. Katana နှင့် Wakizashi နှစ်ခုလုံးသယ်ဆောင်ခြင်းသည်လာမည့်နှစ်ပေါင်းရာချီအတွက်လူကြိုက်များခဲ့သည်. ဆာမူရိုင်းအနည်းဆုံးဓားမှာတန်တိုဓား (ဓား) သို့မဟုတ်ဓားမြှောင်ဖြစ်သည်. မူလကတန်ဂိုဓား ၁၂ မျိုးသည်′ အရှည်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းပေမယ့်အသက် 15 ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Tanto ကိုဖြတ်ပြီးလာရန်သာမန်ထဲကမဟုတ်ပါဘူး′ ကြာရှည်. ဆာမူရိုင်းဓားစုဆောင်းခြင်းသည်အမေရိကန်လူမျိုးများအတွက်အတိတ်ကာလဖြစ်သည်. ပို၍ လူကြိုက်များလာသည့်အရာမှာတိုက်ခိုက်ရေးနှင့်ဖြတ်တောက်ရန်အတွက်ဆာမူရိုင်းဓားကိုအသုံးပြုသောကိုယ်ခံပညာဖြစ်သည်. လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်တတ်နိုင်သမျှစစ်မှန်ဆာမူရိုင်းဓားများမှာ Paul Chen ဓားများဖြစ်သည်. အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့သင့်လျော်တဲ့ Paul Chen Practana Katana ဓားကိုတွေ့နိုင်ပါတယ် $200. သို့သော် ၁၀၀ ထက်နည်းသောအတွက်သင်ကိုယ်တိုင် Paul Chen Practical Plus Katana ကိုသင်ရရှိနိုင်ပါသည်. သငျသညျအနည်းငယ်ပိုမိုစျေးကြီးတစ်ခုခုရှာနေလျှင်, Paul Chen Bushido Katana သို့မဟုတ်သစ်ခွ Katana တစ်သက်တာကြာရှည်လိမ့်မယ်အတော်လေးရိုက်နှက်ယူနိုင်ပါတယ်. Orchid နှင့် Bushido တို့သည် Wakizashi နှင့် Tanto တွင်လည်းရှိသည်. နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, သင်၏ဓားကို ၀ ယ်သည့်အခါအရေးအကြီးဆုံးအရာမှာသင်ရရှိသောဓါးသွားကိုသင်သိရန်ဖြစ်သည်. သင်အလုပ်လုပ်သောဓားတစ်ချောင်းလိုပါကနံရံပေါ်၌သာချိတ်ဆွဲထားသည့်ပစ္စည်းကိုသင်ရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေပါ. ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဓားများအတွက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောမဟုတ်ပါဘူးလျှင်, သင်မေးကောင်းမေးနိုင်သောမေးခွန်းများမေးရန်စတိုးဆိုင်ကိုဆက်သွယ်ပါ. ဂျပန်ဆာမူရိုင်းဓားဝယ်ခြင်းလမ်းညွှန်
ခေတ်သစ် Reality အခြေခံ Self Defense အတွက်ကိုယ်ခံပညာစိတ်ပညာ!
သင်ကလေးလံသောအိတ်တစ်ကွင်းကိုသာလေ့ကျင့်လျှင်, သို့မဟုတ်လေ့ကျင့် & တစ် ဦး mcdojo အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရေးစစ်ရေးလေ့ကျင့်, (သို့) လက်မောင်းကုလားထိုင်နည်းပြတစ် ဦး ကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းခံရသော်လည်းစစ်မှန်သောရန်ပွဲများမကြုံတွေ့ရပါ! ယခုနားထောင်ပါ၊ သင်သိသမျှသတင်းအချက်အလက်နှင့်သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်လေ့ကျင့်မှုအားလုံးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်. သငျသညျကိုယ်ခံပညာ arthelmet ဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါတယ်, နှင့် 16 oz ပွင့်လင်းလက် MMA လက်အိတ်, လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ပန်းခြံတစ်ခုကိုရှာပါ! ရန်သူနှင့်ဆက်ဆံခြင်း၏ဖိစီးမှုနှင့်ဖိအားကိုသင်ခံစားရရန်လိုအပ်သည်, ထိခိုက်ခံရ၏နာကျင်မှုခံစားရသည်, သင့်ကိုလက်သီးနှင့်ကန်ဘောများရှိခြင်း၏ဖိစီးမှုကိုခံစားပါ, သင်နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်းလျှင်တစ်ချိန်တည်းတွင်လက်အိတ်သို့မဟုတ်ခမောက်မပါသည့်စာတိုခြင်းကိုတောင်အကြံပြုလိုပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးနှင့်တိုက်ခိုက်ရေးအကြံပေးချက်များကိုအလွတ်ကျက်ပြီးသင့်အတွက်ကျွန်ုပ်ချီးကျူးပါသည်, ဒါပေမယ့်သင် hit ခံရမဆိုအတွေ့အကြုံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, အချိန်, မြန်နှုန်း, ရွေ့လျားမှု၏အကွာအဝေး, နှင့်အမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွေ့အကြုံသည်လမ်းပေါ်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်သေသွားနိုင်သည်. သင်၏လက်ကောက်ဝတ်ကိုလက်သီးဖြင့်ထိုးနေချိန်တွင်အေးဆေးငြိမ်သက်စွာနေနိုင်ရန်လိုအပ်သည်, သင်၏မျက်နှာကိုလာကြတယ်, ဆုပ်ကိုင်နှင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခံရ. ဒီတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုသင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာအတွေ့အကြုံမှသာဖြစ်သည်. သင်၏ကိုယ်ခံပညာကိုဆက်လက်လေ့လာခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းအားဆက်လုပ်ပါ, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဂီယာနှင့်ကုန်ကြမ်းကျူးကျော်. ၎င်းသည်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနိမ့်ဆုံးနိမ့်ကျစေလိမ့်မည် 110% ခေတ်သစ် Reality အခြေခံ Self Defense အတွက်ကိုယ်ခံပညာစိတ်ပညာ!
ဒီတော့, သငျသညျသိုလှောင်မှုထဲကသင့်ရဲ့မီးစက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်, အဆိုပါတင့်ကားပြည့်စေတော်မူ၏, ကြိုးဆွဲ, နှင့်ဘာမျှမ။? မျှော်လင့်ပါတယ်, သင်ဤလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စခန်းချခရီးစဉ်မီ။? ဤဆောင်းပါးသည်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောပြcommonနာအချို့ကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။? မည်သည့်ပြုပြင်မှုမလုပ်မီ, သင်ယူနစ်တွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်မတော်တဆစတင်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်မီးပွားပလပ်ကိုဖယ်ရှားပါ။? မီးစက်စတင်မည်မဟုတ်သို့မဟုတ်စတင်နေဖို့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, နိုင်ငံခြားအပျက်အစီးများအတွက်မာဖောအိပ်ဇောစစ်ဆေးပါ။? ပြီးတာနဲ့ကြောင်းသန့်ရှင်းသည်, သငျသညျနှစ် ဦး စလုံး၏သင့်လျော်သောအဆင့်ဆင့်ရှိသည်သေချာစေရန်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံစစ်ဆေးပါ။? နောက်ဆုံးတော့, မီးပွားပလပ်၏ဆက်သွယ်မှုကောင်းတစ်ခုသေချာပါစေ. အဆိုပါ alternator စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ပျက်ကွက်လျှင်, မြန်နှုန်းအလွန်နိမ့်နေလျှင်? rpm ကိုချိန်ညှိပါ။? ၎င်းသည် capacitor သို့မဟုတ် windings အမှားများကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်, အရာကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်တင်းကျပ်ရမည်ဖြစ်သည်. အကယ်၍ ဗို့အားသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်တွင်ဝန်မရှိဘဲမြင့်တက်နေပါက, သငျသညျအနိမ့်မြန်နှုန်းဖို့ rpms ချိန်ညှိသို့မဟုတ် capacitor ကိုအစားထိုးရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။? ပြောင်းပြန်, ဗို့အားမရှိဝန်အောက်တွင်အနိမ့်အပြေးလျှင်, သငျသညျပိုမိုမြင့်မားသောမြန်နှုန်းမှ rpms ချိန်ညှိသို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူတ ဦး တည်းနှင့်အတူ capacitor ကိုအစားထိုးရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။? ဖြည့်စွက်ကာ, အနိမ့်ဗို့အားသည်, သင်သည်သင်၏အကွေ့အကောက်များသောခုခံစစ်ဆေးမှုနှင့်သင်၏ rotary diodes အစားထိုးသင့်ပါတယ်, လိုအပ်မယ်ဆိုရင်. အကယ်၍ သင့်ဗို့အားသည် ဝန်မရှိလျှင် OK သည်။, ဒါပေမယ့် သေးငယ်တဲ့ ဝန်ကို ထည့်လိုက်တာနဲ့ ကျသွားနိုင်တယ်။, သင်၏ rpm ကို တိုးမြှင့်ရန် သို့မဟုတ် ဝန်အချို့ကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်နိုင်သည်။? သင့် rotary diodes ကိုလည်း အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။. မြင့်မားသောဝန်ကိုထည့်သောအခါဗို့အားကျဆင်းသွားသည်။, သင်သည် rpm ကိုချိန်ညှိရန် သို့မဟုတ် ဝန်အချို့ကိုဖယ်ရှားရန် လိုအပ်နိုင်သည်။. နောက်ဆုံးတော့, ဗို့အား fluctuates လျှင်, ဒါကြောင့်ချောင်သို့မဟုတ်ညစ်ပတ်ဆက်သွယ်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်သည်။? ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်သင် rpms များကိုလည်းထိန်းညှိရန်လိုအပ်နိုင်သည်. သင့်ရဲ့အိတ်ဆောင်မီးစက် Fixing
ငါးဖမ်းခြင်း – အသုံးဝင်သောအချက်များ
ဒါကြောင့်သင်ငါးမျှားချင်တယ်? ကောင်းပြီ, အကြံဥာဏ်အချို့ပေးပါ. သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုငါးမျှားမီ, ပထမဆုံးလုပ်သင့်တာကတော့ငါးဖမ်းတာကိုခွင့်ပြုမထားကိုစစ်ဆေးတာပဲ, နှင့်, ဟုတ်တယ်, သငျသညျရှိငါးဖမ်းဖို့ပါမစ်ကိုဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေမ. နောက်တစ်ခု, သင်ရှာဖွေနေသည်အဘယ်အရာသည်ငါးအမျိုးအစားပေါ်ဆုံးဖြတ်ပါ, ဒါကြောင့်သင်မှန်ကန်သောငါးစာမျိုးကိုဝယ်နိုင်သည်. မှန်ကန်သောကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်ဖမ်းမိသောငါးပမာဏကိုများပြားစွာတိုးပွားစေသည်, အာမခံချက်. သငျသညျအဘယျသို့ရရန်အကြောင်းကိုသေချာမသိလျှင်, သူတို့ကိုငါးမျှားသည့်ဆိုင်တွင်သာမေးပါ ‘ သူတို့သည်သင့်အမြင့်နှင့်လိုက်ဖက်သည့်ကောင်းမွန်သောတည်ဆောက်မှုရှိသည့်လှံတံကိုရွေးရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်, သင်ပြီးသားတ ဦး တည်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်. သင်တစ် ဦး လိုင်းချ။ နေတဲ့အခါ, နောက်ကွယ်မှာလူတွေရှိလား၊ ရှေ့မှာရှေ့မှာရှိလားဆိုတာမကြည့်ခင်မင်းပတ်ပတ်လည်ကိုအမြဲကြည့်ပါ ‘ သင်သည်ထိုသူတို့ hit ချင်ကြဘူး, ဒါကြောင့်အားလုံးစိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောရရန်အလွန်လွယ်ကူသည်. သငျသညျငါးစာအဖြစ်တီကောင်အသုံးပြုနေလျှင်, နှစ်ကြိမ်ချိတ်မှတဆင့်ထားရန်သေချာပါစေ, ဒါကြောင့်လိုင်းပယ်ပျံမသွားပါဘူး. သငျသညျ floating ဆွဲဆောင်အသုံးပြုနေလျှင်စိတ်ရှည်ပါ ‘ အချိန်ကြာနိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်မကြာခဏငါးချောင်းမြောင်းအတွက်လဲလျောင်းလိမ့်မည်, သူတို့လုယူရာဥစ္စာကိုဖမ်းမီ၎င်းတို့၏အချိန် biding. ဘယ်အချိန်မှာငါးကိုက်, အနည်းငယ်အတွက် reel သေချာပါစေ, ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်ထုတ်လိုက်ပါ, ပြီးတော့အတူတူပင်. အနှေးတိုးတက်မှုသည်သော့ချက်ဖြစ်သည်, မဟုတ်ရင်လိုင်းကကွဲနိုင်တယ်. ငါးနှင့်အလုပ်လုပ်ပါကရုန်းကန်မည်မဟုတ်. သငျသညျချိတ်ဆက်ရရှိပါသည်သောငါးပိုကြီး, ပိုအရေးကြီးတာကဒီဖြစ်ပါတယ် ‘ သည်းခံခြင်းသည်ငါးဖမ်းခြင်း၏အလွန်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်. သင်ငါးဖမ်းမိပြီးတာနဲ့, ပတ်ပတ်လည်အိပ်ခြင်းနှင့်ဖြည်းဖြည်းကျဉ်းကျပ်ဖို့ကမချန်မထားကြဘူး ‘ ဒါရက်စက်တယ်. အဲဒီအစား, လည်ပင်းကိုလှည့်ပါ. ငါးကတကယ်ကိုသေးငယ်တယ်ဆိုရင်, ပြန်ထားပါ, ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကမကောင်းအခါသူကသတ်ပစ်သို့မဟုတ်နောက်တဖန်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပေါ်စေ၏အဘယ်သူမျှမမှတ်ရှိပါတယ်. ငါးဖမ်းခြင်း – အသုံးဝင်သောအချက်များ
ဂေါက်သီး၏လျှို့ဝှက်ချက်များ! ဂေါက်သီးသမားအများစုသည်သူတို့၏ဂေါက်သီးကစားနည်းတိုးတက်စေရန်အတွက်ဘာမှမလုပ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ကစားနည်းကိုတိုးတက်စေရန်ဂေါက်သီးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေရသည့်အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်. သို့သော်ဤရှာဖွေမှု, ပိုပြီးမကြာခဏကြောင်းစုစုပေါင်းပျက်ကွက်တက်အဆုံးသတ်မဟုတ်. များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ယခင်ကမသိသေးသောအရာအသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အစွန်အဖျားအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါစိတ်လှုပ်ရှားမှုများစွာဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုလျင်မြန်စွာလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း. ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကလိုချင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကမဖြစ်ပေါ်ပါဘူး. သို့တိုင်သူတို့သည်သူတို့၏ဂိမ်းများတိုးတက်စေရန်ဂေါက်သီးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုပိုမိုရှာဖွေရန်ဆက်လက်ကြိုးစားနေကြသည်. သူတို့ကျရှုံးရသည့်အကြောင်းရင်းမှာဂေါက်သီးရိုက်ခြင်း၏တကယ့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသူတို့သဘောမပေါက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်. လျှို့ဝှက်ချက်, အရာမဆိုဂေါက်သီးရဲ့ဂိမ်းတော်လှန်ခြင်းမှအာမခံသည်, နေ့ချင်းညချင်း. ဂေါက်သီး၏တကယ့်လျှို့ဝှက်ချက်, အောင်မြင်မှုရဲ့အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်လိုပဲ, အလွန်ရိုးရှင်းပြီးသင်ကြားသည့်အခါသင်ဖတ်ပြီးသောအခါဖတ်လျှင်ပင်ဖတ်ရန်လွယ်ကူသည်. ဒီမှာပါ. မည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆိုထူးခြားစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်ဂေါက်သီးကစားခြင်း၏တကယ့်လျှို့ဝှက်ချက်သည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကြွက်သားများကိုဒဏ်ငွေနှင့်ဂေါက်သီးရိုက်ခတ်မှုကိုပြင်ဆင်ရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။. ဒါပဲ. ဂေါက်သီးကစားတာဟာလမ်းလျှောက်တာနဲ့မတူဘူး, သဘာဝကျကျမလာပါဘူး. ဘောလုံးဘောလုံးကိုပင်ကန်လိုက်ခြင်းသည်ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းထက် ပို၍ သဘာဝကျသည်. ရလဒ်မှာကိုယ်ခန္ဓာသည်ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးလွှဲလုပ်ရန်လိုအပ်သောမှန်ကန်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုခုခံတွန်းလှန်ခြင်းဖြစ်သည်. ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဤခုခံနိုင်စွမ်းကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာဂေါက်သီးလွှဲ၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဆန့ ်၍ ကြွက်သားများကိုကြံ့ခိုင်စေရန်နှင့်အားကောင်းရန်ဖြစ်သည်။. သင်အောင်မြင်စွာပြုလျှင်, ဂေါက်သီးလွှဲကပိုပြီးသဘာဝကျကျလာလိမ့်မယ်၊ ဒါကမင်းရဲ့ဂိမ်းထဲမှာပြလိမ့်မယ်. မလှည့်စားပါနဲ့, ဂေါက်သီးကစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားအဖိုးတန်သောလျှို့ဝှက်ချက်လည်းမရှိပါ. ဂေါက်သီး၏စစ်မှန်သောလျှို့ဝှက်ချက်များ
From August through March, sports enthusiasts everywhere can be found watching their favorite college football or basketball games at tailgating parties, picnics, campsites or at home. Because most remote sports gatherings have become high-tech, the use of satellite TVs, microwave ovens, computers and even blenders to whip up party drinks is becoming more the norm than the exception. And the common denominator is power. Enter the portable generator. Once reserved only for emergencies, the portable generator has become the real power behind today’s tailgate parties. Manufacturers such as Honda Power Equipment are designing generators that are powerful, ပေါ့ပါးသည်, fuel efficient and that provide clean power necessary for sensitive electronics. “Choosing the right generator is easy: Just select the appliances you’ll want to operate and match the output of the generator to your needs,” says Tom Pernice, Marketing and Product Planning at Honda Power Equipment. (You can findahandy wattage calculator at www.honda.com.) “Look foraquiet generator that won’t disturb other tailgaters.” These tips will help you get the most out of your generator: Be sure to packapower strip for plugging in multiple appliances, and because games can run into overtime, take along extra gas for the generator-stored in an approved safety container. For the party itself, don’t forget wet wipes for sticky hands, extra chairs for drop-in guests, personalized beverage containers so guests won’t mix up their glasses or cups, and enough water to extinguish hot charcoal. Postgame, enjoy leftovers while you clean up and wait for the traffic to dissipate. Then plan for the next party. Power to the people: A portable generator can addalot to an outdoor tailgate party-or other special event. Plugging in to the fun ofasporting event can be even more electrifying when you bring alongaportable generator. Generating Excitement At Sporting Events
အစဦးတွင်, ဂျာမနီမှာဘုံရည်မှန်းချက်အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း ၃၂ သင်းရှိတယ်: သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုလုပ်ပြီးနောက်အလှည့်အပြောင်းကိုသတ်မှတ်ပါ. သုံးနိုင်ငံပြီးသားဒီအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ. ဂျာမနီ, အင်္ဂလန်နှင့်အီကွေဒေါနိုင်ငံတို့သည်ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား၏နောက်တစ်ကြိမ်တွင်လက်မှတ်များရရှိထားကြသည် 2006. ကော့စတာရီကာ, ပိုလန်နှင့်ပါရာဂွေးများကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်. ကမ္ဘာ့ဖလားအိမ်ရှင်နိုင်ငံဂျာမနီ, အီကွေဒေါနှင့်အတူ Group A ကို ဦး ဆောင်နေသည်, နှင့်အတူ6ကော့စတာရီကာနှင့်ပိုလန်တို့တွင်အချက်များမရှိပါ. အင်္ဂလန်သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းကပြိုင်ပွဲရှစ်ပွဲအနိုင်ရခဲ့သည့်အတွက်အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့သည်. အင်္ဂလန်နှင့်ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုတို့အကြားကစားခဲ့သည့်နောက်ဆုံးရမှတ်မှာ 2-0 (၈၃) မိနစ်တွင်လီဗာပူးလ်အသင်း၏တိုက်စစ်မှူးဂျရတ်ကမူ (၄၁) မိနစ်တွင်ဒုတိယဂိုးထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခဲ့သည်။. ဝိန်းရွန်နီ, သူသည်လက်ရှိမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်ကစား, အင်္ဂလန်အသင်းသည်ဂိုးသွင်းရန်ကြိုးစားနေစဉ်မိုက်ကယ်အို ၀ င်ကိုအစားထိုးရန်ဒုတိယပိုင်းတွင်ဂိမ်းထဲ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်. သူကAprilပြီလအပေါ်သူ၏ခြေတစ်အရိုးဖဲ့ကတည်းကဤသည်ရွန်နီရဲ့ပထမဆုံးဂိမ်းဖြစ်ခဲ့သည် 29. အင်္ဂလန်သည်အုပ်စု (ခ) ကိုအမှတ် (၆) ဖြင့် ဦး ဆောင်နေသည်. သူတို့ကကစားနှစ် ဦး စလုံးဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီအပေါ်သုံးမှတ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်. ပါရာဂွေးနှင့်တောင်အမေရိကတိုက်ကိုဖျက်သိမ်းသည့်ပွဲတွင်ဆွီဒင်အသင်းသည်ရမှတ် ၃ မှတ်ရရှိခဲ့သည်. ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုသည်အချက်တစ်ချက်တွင်ရှိနေသည်. ကမ္ဘာ့ဖလားဒုတိယအဆင့်ကိုသတ်မှတ်ရန်ပထမအသင်းများ
သင့်လျော်သော Running ဖိနပ်ကိုရွေးချယ်ပါ
မှန်ကန်တဲ့လည်ပတ်ဖိနပ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းဖြစ်ခြင်းရှိမရှိကိုများစွာကွဲပြားစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်အဆင်ပြေမည်လား၊. အရောင်းအ ၀ ယ်စျေးဝယ်ခြင်းသည်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအပြေးသမားအများစုပြုလုပ်ခဲ့သောကြီးမားသောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်ထွက်ပြေးပြီးအနိမ့်ဆုံးသောအပြေးဖိနပ်အားဖြင့်သင်ရှာနိုင်သည်. ကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်ပါ, သငျသညျ Walmart မှာသင့်လျော်သောပြေးဖိနပ်ကိုရှာဖွေသွားကြသည်မဟုတ်! ဈေးပေါပေါစဉ်းစားခြင်းကဖိနပ်မပါသောစိတ်ဆင်းရဲမှုများကြောင့်သင်အားဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်. ပို၍ သက်တောင့်သက်သာရှိသူအချို့သည်သူတို့၏ဒူးခေါင်းမှုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မျက်နှာသုတ်ပဝါကိုမချမှီအမြတ်အစွန်းများသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။. ရွေးချယ်မှုအားလုံးနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖိနပ်များကိုယနေ့ရရှိနိုင်သည်, သင့်အတွက်ဖိနပ်စီးရန်အတွက်သင့်တော်သောဖိနပ်တစ်စုံကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်. သို့သော်ဤနေရာတွင်သင့်အားကူညီရန်လမ်းညွှန်အချို့ရှိပါသည်. အရင်ဆုံးအသံထွက်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်, သောခြေထောက်သပိတ်မှတဆင့်ဖနောင့်မှခြေချောင်းဖို့ခြေကိုလှိမ့်နေသည်. သင့်တော်သော (သို့) ကြားနေသောအသံထွက်သည်ဖနောင့်အပြင်ဘက်ကို ဖြတ်၍ သင်၏ခြေထောက်ဘောလုံးအထိထိသည်. ဒါကသင်၏ခြေထောက်ကအကျိုးသက်ရောက်မှုရဲ့ဖိစီးမှုကိုလျော့နည်းစေတယ်. အနိမ့်ကျဆုံးသောညနေခင်းသည်မလုံလောက်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ခြေထောက်ပြင်ပမှာကြားနေအနေအထားတွင်ရှိနေခြင်းထက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းအများစုကိုရရှိသည်. အလွန်အကျွံပြောဆိုခြင်းသည်ပြင်ပမှသင်၏ခြေထောက်အတွင်းသို့လှိမ့်လွန်းနေသည်. သင်၏အသံထွက်အဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်, မင်းလမ်းလျှောက်ထွက်သွားတဲ့ဖိနပ်ကိုကြည့်ပါ. လူအများစုသည်ဖနောင့်အပြင်ဘက်တွင်စတင်ပါလိမ့်မည်, အစစ်အမှန်ညွှန်ပြချက် forefoot အပေါ် wear ဖြစ်လိမ့်မည်. ဖိနပ် wear အများစုလျှင်: ?medial တွင် (အတွင်းပိုင်း) ဘေးထွက်ပြီးတော့သင် Overpronate ?နှစ် ဦး နှစ်ဖက်တွင် (အပြင်ဘက်) ဘေးထွက်ပြီးတော့သင် Underpronate ?ခြေသည်ခြေနင်းတလျှောက်ညီညွတ်မှုရှိပါကသင်၌ကြားနေအပြောင်းအလဲရှိသည်။ ဤဗဟုသုတကသင့်ခြေထောက်အတွက်သင့်လျော်သောဖိနပ်ကိုရွေးရန်သင်သိသောအချက်အလက်များကိုသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။.
Kart ဘောင်များသွားပါ – သင့်အတွက်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှု
Karting ဝါသနာရှင်များသည်သူတို့၏စိတ်ထဲတွင်ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ထည်၏ပုံသဏ္laာန်ကိုထွင်းဖောက်ထားသည်: ပေါ့ပါးသည်, နည်းနည်းလေးအသုံးမ ၀ င်ဘဲရှေ့သို့ကတ်ကိုစတင်နိုင်သည့်စွမ်းအားရှိပြီးအကြမ်းခံနိုင်သောပစ္စည်း. နာမည်ကြီး McLaren ကဲ့သို့သောပညာရှင်ဆန်ဆန်တည်ဆောက်ထားသောလူကြိုက်များသောပြိုင်ကားများကဲ့သို့သောရှားပါးပစ္စည်း. အခြမ်းမှတစ်ဆင့်ဖြတ်သွားနိုင်သော karts သည်မြေတစ်စင်တီမီတာကိုဘီးမမြှင့်ဘဲအမြန်နှုန်းဖြင့်ကျည်ဆန်အရှိန်ကိုပြောင်းလဲစေသည်, ငါ၌အနာဂတ်ကားများကဲ့သို့လျင်မြန်စွာကဲ့သို့လျင်မြန်စွာကူး, စက်ရုပ်? ပြီးပြည့်စုံသောဘောင်များနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောတာယာလာပါတယ်, တာယာ “ovenရာဝတီ” ကွေးကို run သည့်အခါအကောင်းဆုံးသောစွမ်းဆောင်ဆွဲနှင့်အတိမ်အနက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်စုံလင်ခြင်းသို့. ရဲ့ရှုပ်ထွေးပွေလီလှဆွေးနွေးမှုများနှင့်သင်၏ go-kart အဘို့အဘောင်ပေါ်တွင်ရှုထောင့်ထားကြပါစို့. ကိုယ်ထည်ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စိတ်အားထက်သန်သောစက်ဝိုင်းများတွင်ခေါ်ဆိုသည်, ဝေးဒီအားဖြင့်ဤစက်၏အရေးအပါဆုံးအပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်. ဆောက်လုပ်ရေးသည်ခိုင်မာသော go-kart ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်အဓိကဖြစ်သည်. အဘယ်အရာကိုတစ် ဦး ဘောင်ပါဝငျသညျ? ရိုးရိုးဘောင်တစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်လျှင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုအတူတကွကိုင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်. ဤအ speedsters ၏ဖြစ်ရပ်၌တည်၏, ဘောင်ကို torsion bars များဖြင့်ပေါင်းစည်းသည်. ခိုင်မာသောဘောင်များသည်တိုတောင်းသောဘားများဖြင့်အတူတကွဖြတ်ကျော်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်, နှင့်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘောင်ပိုရှည်အရက်ဆိုင်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မရှိသောခိုင်မာသောဘောင်များသည်အစောပိုင်း go-karts များ၏ကျောရိုးဖြစ်ပြီးအလွယ်တကူဖြိုဖျက်နိုင်ခဲ့သည်. ပထမ, ရိုးရှင်းသော go-karts တွင်သတ်မှတ်ချက်များမရှိပါ (အရေးအပါဆုံး, ရပ်ဆိုင်းမှုနှင့်ယာဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ) လှည့်နေစဉ်ပြစ်ဒဏ်ဘောင်လွယ်ကူစေရန်, အရှိန်, နှင့်ရပ်တန့်. အပေါ်အပြေး2ဒါမှမဟုတ်4စက်ဘီးအင်ဂျင်သည်ဘောင်၏ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေပါ. သင်၏တာယာများ၌ဆွဲဆောင်မှုမရှိခြင်းသည်သင်၏ဘောင်ပေါ်တွင်အလေးချိန်မညီမျှမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, တစ်ချိန်တည်းတွင်တစ်ကောင်သို့မဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုမြည်နေခြင်း. အနှစ်သာရအတွက်, သင်၏မော်တော်ယာဉ်သည်ကတ္တရာပေါ်တွင်ဇစ်ပ်မည်ကိုမည်မျှရွေ့လျားနေသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဘောင်ကတာ ၀ န်ရှိသည်, ကွန်ကရစ်, သို့မဟုတ်ဖုန် – သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျယ်ပြန့်သောအလှည့်အပြောင်းနှင့်တိုတောင်းသောအလှည့်များသို့သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်. ကြံ့ခိုင်, ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားသောဘောင်သည်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာစီမံရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်လှည့်တဲ့အခါမှာ. စောင့်ပါ, သင့်ရဲ့ go-kart ကရှေ့ဆက်ပေါက်ကွဲအဖြစ်ညှဉ်းဆဲခြင်းနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်ထင်တဲ့ဘောင်မဟုတ်ပါဘူး? ဒါပေါ့ – သို့သော်အကောင်းဆုံးဘောင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းဖြစ်သည်. go-karts များသည်ဘယ်ဘက်နှင့်ညာသို့ဘယ်လောက်လှည့်သည်ကို frame များကတိုက်ရိုက်တာ ၀ န်ရှိသည်. အားနည်းသော go-karts များသည်ဈေးပေါသောအစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်ပြီးအလှည့်တလျှောက်လျှောကျလျှက်မျောမျောနေသည် – အချို့သောဖြစ်ရပ်များအတွက်, သတိမဲ့မောင်းနှင်မှုနှင့်အတူ၎င်း၏ဘေးထွက်သို့လှန်လှော. “ဘေးထွက်ကိုက်” လျှောမပါဘဲလမ်းကြောင်းကိုစိုက် Go-kart စောင့်ရှောက်ခြင်းရည်ညွှန်းသည်. သင့်လျော်သောဘောင်မရှိဘဲ, go-karts သည်အထိန်းအချုပ်မဲ့သွားလိမ့်မည်, ပင်အချို့သောကိစ္စများတွင်အင်ဂျင်မှဖိအားကျော်ကြောင့်ပိတ်. go-kart ကိုယ်ထည်၏ဒီဇိုင်းသည်အလှည့်ကျအတိုင်းအတာနှင့်ဘေးထွက်ကိုက်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်နှင့်အမျှအရာအားလုံးပါ ၀ င်သည်. နောက်ဘက်သံလမ်း၏ width ကိုပါ (go-kart ဘောင်များသည်ရှေ့သံလမ်းများနှင့်နောက်ရထားလမ်းများဖြစ်သည်) ကျဉ်းမြောင်းသည်, ထံမှအထိတိုင်းတာအတူ 24 ရန် 25 – မှ “ကွမ်းခြံကုန်း” ရန် “ကွမ်းခြံကုန်း”, ရထားလမ်းစွန်း – ကဒီထက်ဘေးထွက်ကိုက်ရပါလိမ့်မယ်. ကျယ်ပြန့်သောသံလမ်းများသည်အစဉ်အဆက်ထက်ကျော်လွန်နိုင်သည် 30 စံ go-karts ပေါ်မှာ. ရှေ့နှင့်နောက်သံလမ်း၏ဒိုင်းနမစ်ကိုဤဥပမာအားဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်ပုံဖော်နိုင်သည်: မင်းမှာပုလင်းနှစ်လုံးရှိတယ်ဆိုပါစို့ – နှစ်ဂါလံဘူးနှင့်တစ် ဦး 16 oz. ရေဘူး. ကလျင်မြန်ပေးခြင်း, ၎င်း၏ဘေးထွက်မှခက်ပွူ – ဘယ်ကွန်တိန်နာက၎င်း၏ဘေးထွက်မှတင်ရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်? သင်ရေပုလင်းမှန်းဆလျှင်, သင်မှန်ပါတယ်! ကျယ်ပြန့်သောသံလမ်းများသည်တည်ငြိမ်မှုကိုပေးသည် “အခြေခံအုတ်မြစ်” လှည့်နေစဉ်, ခြုံငုံဘေးထွက်ကိုက်လျှော့ချ. သင်၏ go-kart အတွက်မှန်ကန်သောဘောင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်စီးနေသည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်. ကတ္တရာလား, ကွန်ကရစ်, သို့မဟုတ်ဖုန် – ကွဲပြားခြားနားသော frames များကိုမျက်နှာပြင်အရသိရသည်ကွဲပြားခြားနားပြုမူ. ဥပမာ, ဖုန်လမ်းကြောင်းဘောင်များသည်ရှေ့ရထားလမ်းတိုများနှင့်နောက်ကျောရထားလမ်းများပါ ၀ င်သင့်သည်. အမှိုက်ပုဒ်များသည်ဖိစီးမှုနှင့်စိန်ခေါ်မှုများစွာကိုရှေ့ရထားလမ်းတွင်နေရာ ချ၍ အမှိုက်များမှတစ်ဆင့် zipping zils ခိုင်မာသည့်နောက်ကျောသံလမ်းများသည်အလှည့်ဖြတ်တောက်စဉ်အင်ဂျင်ကိုပါဝါဖြတ်စေနိုင်သည်. အမှိုက်လမ်းကြောင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဘောင်မှာကျဉ်းမြောင်းသောရှေ့တန်းနှင့်နောက်ကျောနောက်ကျောရှိသူများဖြစ်သည်, အပြန်အလှန်ကတ္တရာနှင့်ကွန်ကရစ်ရန်. ဘောင်၏ A-1 စွမ်းဆောင်ရည်သည်တာယာ၏စွမ်းအားအပေါ်များစွာမူတည်သည်. low traction တာယာ (မရတာယာ “တုတ်” ကောင်းစွာမြေပြင်) မျက်နှာပြင်၏တိကျခိုင်မာစွာကိုဆီးတားရန်အလုံအလောက် grooved ကြသည်မဟုတ်, မေ့မေ့လျော့လျော့ဖို့ခိုင်မာသောဘောင် rattling. ၎င်းသည် go-kart တစ်လျှောက်လုံးအလေးချိန်မညီမျှမှုကိုဖြစ်စေသည်, သင်၏ငွေချေးသူကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းသည်၎င်းသည်လုံးဝမဟုတ်ပါ. ဒီဇာတ်လမ်းကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ: သင်၌ roller စကိတ်နှစ်စုံရှိသည်. တစ်ခုမှာဘီးတစ်ဝက်တစ်လက်မအကျယ်ရှိပြီးနောက်တစ်ခုမှာ ၃ လက်မအကျယ်ဘီးများရှိသည်. သင် roller စကိတ်စီးအဖြစ်ပိုကောင်းတဲ့ချိန်ခွင်လျှာပေးလိမ့်မယ်ဘယ် pair တစုံ? သငျသညျသင်္ချာကိုချစ်လျှင်, ညီမျှခြင်းနှင့်အတူပုံသေနည်းအဖြစ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲဆက်ဆံပါ: ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ = တည်ငြိမ်မှု. ဆက်လုပ်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီအဖိုးတန်တဲ့အသိပညာနဲ့ကာတွန်းရုပ်သေးရုပ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပါ! karting ဝါသနာရှင်များအကြားအဓိကပြissueနာကတော့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘောင်၏သက်တမ်းနှင့်သက်တမ်းဖြစ်သည်. အားလပ်ချိန်နှင့်အလှည့်ကျများကိုအပြစ်ပေးခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်း, အကြိမ်ကြိမ်နံရံများကိုခြေရာခံရန်နာကြည်းစေသောထိခိုက်မှုများနှင့်အတူ, မဖြစ်နိုင်သည့်ဘောင်ကိုပုံပျက်စေနိုင်သည် “ပေါ်လာတယ်” နောက်ကျော၎င်း၏မူရင်းအခြေအနေ. ကျွမ်းကျင်သူများကနှစ်စဉ်ဘောင်အစားထိုးအကြံပြုသည်. သင်၏ kart ကိုနောက်ပြန်လမ်းတစ်လျှောက်ပြေးဆွဲခြင်းကဲ့သို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိစေရန်သင်၏ kart တွင်လေ့ကျင့်နိုင်သည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းစနစ်များစွာရှိသည်. သင်၏ကန ဦး အစတွင် finish line ကိုအသုံးပြုပြီး Kart ကိုအပြေးပြိုင်ခြင်းနှင့်သင်၏အစမှတ်ကိုအပြီးသတ်မျဉ်းကြောင်းအနေဖြင့်အသုံးပြုပါ “ပြောင်းပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှု” ဘောင်ပေါ်မှာ, အကယ်၍ သာမန်အားဖြင့်သင်သာသာမန်သင်တန်းကိုပြေးနေလျှင်ပုံသဏ္shapedာန်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပုံဖော်သည်. ဒါဟာသင်၏ speedster ပေါ်တွင်အချိန်လက်များပြန်လှည့်ခြင်းနှင့်တူ၏! မှန်ကန်သော go-kart ကိုယ်ထည်ကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိနိုင်သည်. ဆွဲအားမြင့်တာယာများနှင့်ခိုင်မာသောဘောင်များသည်ဘေးအန္တရာယ်အတွက်နည်းလမ်းဖြစ်သည်, သင့်စက်အားတင်းကျပ်စွာလည်ပတ်စေပြီးခါးဆစ်ပေါ်တွင်အားစိုက်ထုတ်ခြင်းများဖြစ်စေသည်. ဆွဲအားနည်းသောတာယာများသည်မညီမျှသောကိုယ်အလေးချိန်ကိုပြောင်းစေပြီးပေါင်မုန့်အိတ်များကဲ့သို့သင်၏ဘောင်ကိုကွဲစေနိုင်သည်. သင်ရွေးချယ်သော go-kart အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ frames အတွက်ရွေးချယ်မှုများသည်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်, go-kart တစ်ခုစီနှင့်သူတို့၏အင်ဂျင်သည်အချို့သောအခြေအနေများတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. တောင့်တင်းသောဘောင်များမှာ 2-cycle နှင့် 4-cycle အင်ဂျင်များဖြစ်ပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် frame များကိုပိုမိုမြင့်မားသောမြင်းကောင်ရေအင်ဂျင်များဖြင့်တွေ့ရသည်. သတိရပါ, တိုက်နယ်ပိုမိုတိကျခိုင်မာစွာ, ပိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တစ်ကိုယ်ထည်ဖြစ်သင့်သည်! Kart ဘောင်များသွားပါ – သင့်အတွက်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှု